တြိဂံပုံပြင် – ခင်မမမျိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » တြိဂံပုံပြင် – ခင်မမမျိုး
တြိဂံပုံပြင် – ခင်မမမျိုး
Posted by kai on Jan 27, 2013 in Critic, Politics, Issues, Think Tank | 13 comments
ကျွန်မတို့ ခြောက်တန်းတုန်းက သင်္ချာဘာသာရပ် လေ့လာသင်ယူရချိန်တွေမှာ algebra သင်ရချိန်ဆိုရင် ပျော်ရသလောက်၊ Geometry သင်ရချိန်ဆိုရင်တော့ အတော်စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မျဉ်းပြိုင်တွေ၊ စတုရန်းပုံတွေ၊ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံတွေနဲ့ တြိဂံပုံတွေ ဆွဲရလို့ပါပဲ။ ပေတံသုံးရမှာပျင်းတဲ့ ကျွန်မက မျဉ်းတွေကို လက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ဆွဲလေ့ရှိတာကြောင့် စည်းကမ်းကြီးတဲ့ သင်္ချာဆရာမနဲ့ ခဏခဏ ထိပ်တိုက်တွေ့တတ်ပါတယ်။ တနေ့တော့ သုံးနာရီတြိဂံကို လက်နဲ့ ဆွဲချလိုက်တာ မျဉ်းတွေက တောင်ရောက်၊ မြောက်ရောက်ဖြစ်ပြီး ဘာကြီးမှန်းမသိ ဖြစ်သွားပါတယ်။ စာအုပ်ထပ်ချိန် နီးနေတာကြောင့် ပြန်ဖျက်ဆွဲချိန်လဲ မရတော့ပဲ မျဉ်းတွေလိုက်ဆက်လိုက်တာ အနားသေးသေးလေးတွေ ဆယ်နားလောက်များ ဖြစ်သွားသလားတောင် မသိလိုက်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာမနဲ့ ကြိမ်လုံးနဲ့ လက်ဖ၀ါး တွေ့ကြတော့တာပါပဲ။ ပြီးတော့ ဆရာမကလဲ ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ “သုံးနားညီ တြိဂံပုံ ဆွဲရင် မျဉ်းသုံးကြောင်းကို အနားညီညီနဲ့ ဘယ်လိုတြိဂံပုံ ပေါ်လဲဆိုတာ စဉ်းစားပြီးမှ ဆွဲရမှာပေါ့။ ကိုယ်ဆွဲချင်သလို တောင်ဆွဲ၊ မြောက်ဆွဲ လျှောက်ဆွဲနေရင် ပုံပျက်သွားမှာပေါ့” တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ အဲဒီ တြိဂံပုံပြင်လေးကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ရှိနေရာက တခါမှာတော့ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဥပဒေအနီးကပ်စာမေးပွဲ သင်တန်းတခု သွားတက်မှပဲ သတိပြန်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ၀ါသနာအရ နိုင်ငံရေးပညာလေ့လာမိရာက နိုင်ငံရေးနဲ့ ဥပဒေတို့အကြားက အရေးပါတဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေကို သတိထားမိပြီး၊ ဥပဒေပညာရပ်ကိုပဲ တွဲဖက် စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်။ ပြင်ပကပဲ စာအုပ်တွေ လျှောက်ဖတ်နေရုံနဲ့ ပညာရပ်တခုကို စနစ်တကျလေ့လာ တတ်မြောက်ဖို့ ဆိုတာကလဲ မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဥပဒေကို ပညာရပ်တခုအနေနဲ့ လေ့လာဖို့ ဆက်ပြီး စဉ်းစားရပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ ဥပဒေဘွဲ့တခုကို အချိန်ပြည့်သွားတက်ဖို့ကလဲ မဖြစ်နိုင်တော့ တာကြောင့် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်က အဝေးသင်နိုင်ငံတကာ ပရိုဂရမ်ကနေ တဆင့်ပဲ လေ့လာသင်ယူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပရိဂရမ်က ဖတ်ရမယ့် စာအုပ်တွေကို သင်ရိုးညွန်းတန်းအတိုင်း ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး၊ နှစ်စဉ်မေလဆိုရင် စာမေးပွဲတွေ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုလို့ရတဲ့ ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲနီးချိန် ရောက်ရင်တော့ Revision သင်တန်းတွေကို ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က တာဝန်ယူ သင်ကြားပို့ချပေးပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က သင်ကြားပို့ချတဲ့ ကွန်စတီကျူးရှင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ သင်တန်းကို သွားတက်မိစဉ်မှာ အာဏာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှု (Separation of Powers) အကြောင်းကို ပါမောက္ခတယောက်က သင်ကြားပို့ချပေးပါတယ်။ ဒီသဘောတရားရဲ့ အနှစ်ချုပ်လေးကတော့ ဒီလိုပါ။
နိုင်ငံတော်အာဏာသုံးရပ်ဖြစ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ ဥပဒေပြုအာဏာနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာ တို့မှာ သိသာထင်ရှားသော အာဏာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှု (separation of powers) ရှိခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရဲ့ ကွန်စတီးကျူးရှင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အာဏာကို တဦးတယောက်၊ တစု၊ တဖွဲ့က ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိစေရေးအတွက် အာဏာအပိုင်းအခြား ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအများစုမှာ ကျင့်သုံးနေကြပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဟာ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ စတာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရတဲ့ ပါတီဟာ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့ဟာ အစိုးရမူဝါဒများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရပါတယ်။ တပ်မတော် ကတော့ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အမတ်များ ပါဝင်တဲ့ ပါလီမန် (လွှတ်တော်) ကို တာဝန်ခံမှု (accountability) ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံများရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပါလီမန် ပါဝင်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းမှု သဏ္ဍာန်တွေ ကွဲပြားပါတယ်။ ဥပဒေပြုအာဏာဟာ ပါလီမန်အမတ်များနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ပါလီမန် အမတ်များကို တရားဥပဒေပြုသူများ (law-makers) တွေလို့ သတ်မှတ်ကြ ပါတယ်။ တရားစီရင်ရေးအာဏာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်က တရားသူကြီးများနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ တရားသူကြီးများဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ပါလီမန်က ချမှတ်လိုက်တဲ့ အက်ဥပဒေများအတိုင်း တရားစီရင်ရေးအာဏာကို ကျင့်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားစီရင်ရေးအာဏာဟာ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာနဲ့ ရောထွေးခြင်း မရှိရပါဘူး။ တရားသူကြီးများဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘက်လိုက်မှုတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘက်လိုက်မှုတွေ၊ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေက ကင်းဝေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ရယူထားတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကလဲ တရားသူကြီးများကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်၊ အတွေးအခေါ် မတူသူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ အသုံးချခွင့် မရှိပါဘူး။
အာဏာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုဆိုတဲ့ သဘောတရားဟာ နိုင်ငံရေးပညာရပ်မှာလဲ အရေးကြီးတဲ့ သဘောတရား ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်မနဲ့ သိပ်ပြီး မစိမ်းလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပါမောက္ခရဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ မှတ်မိအောင်ဆိုပြီး သုံးနာရီတြိဂံပုံလေးနဲ့ သင်ကြားပို့ချပေးပုံလေးကတော့ အဆန်းတကြယ် စိတ်ဝင်စားစရာလေး ဖြစ်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ကွန်စတီကျူးရှင်းစည်းမျဉ်းတရပ်ဖြစ်တဲ့ အာဏာပိုင်းခြား သတ်မှတ်မှုဟာ မည်၍မည်မျှ အရေးကြီးကြောင်း၊ အာဏာသုံးရပ် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှု ကို ရောထွေးရှုပ်ထွေးအောင် လုပ်လို့မရကြောင်းနဲ့ ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ မည်သို့သော အခြေအနေများကို ရှောင်ရှားသင့်ကြောင်း စတာတွေကို စနတ်ကျ ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ တြိဂံပုံလေးကိုပြပြီး ပြောပြနေတာကြောင့် သင်ကြားမှုကို နာယူနေချိန်မှာပဲ ကျွန်မရဲ့ အတွေးလေးတွေကလဲ ခြောက်တန်းတုန်းက တြိဂံပုံပြင်လေးကို သတိသွားရနေမိခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းပို့ချပြီးလို့ မေးခွန်းတွေ မေးရချိန်မှာ ပါမောက္ခကို မေးခွန်းတခု မေးလိုက်မိပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ၊ ဥပဒေပြုရေးအာဏာနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့ ပါဝင်တဲ့ အာဏာပိုင်းခြား သတ်မှတ်မှု တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်လေး ပျက်သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲလို့ပါ။ ပါမောက္ခက တခုပဲ ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကျရှုံးမှု (state failure) ဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့။
အဲဒီနေ့က ကင်းဘရစ်ကနေ လန်ဒန်ကို ပြန်သွားတဲ့ ရထားပေါ်မှာ
” သုံးနားညီ တြိဂံပုံ ဆွဲတဲ့အခါ မျဉ်းသုံးကြောင်းကို အနားညီညီနဲ့ ဘယ်လိုတြိဂံပုံ ပေါ်လဲဆိုတာ စဉ်းစားပြီးမှ ဆွဲရမှာပေါ့။ ကိုယ်ဆွဲချင်သလို တောင်ဆွဲ၊ မြောက်ဆွဲ လျှောက်ဆွဲနေရင် ပုံပျက်သွားမှာပေါ့”
” အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ ဥပဒေပြုရေးအာဏာနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့ ပါဝင်တဲ့ အာဏာပိုင်းခြား သတ်မှတ်မှု တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်လေး ပျက်သွားရင် နိုင်ငံတော်ကျရှုံးမှု (state failure) ဖြစ်သွားမှာပေါ့“
ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ ပြန်လည်တွေးမိရင်း၊ အတွေးနယ်ကျွံသွားခဲ့တာ ရထားပေါ် လူကုန်သွားမှပဲ လန်ဒန်ရောက်မှန်း သတိထားလိုက်မိပါတော့တယ်။ တြိဂံလေးတွေကလဲ တခါတရံမှာ လူတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖမ်းစားတတ်တယ် ထင်ပါရဲ့။
ခင်မမမျိုး (၂၆၊ ၁၊ ၂၀၁၃)
နိုင်ငံကို သုံးနားညီ တြိဂံအဖြစ် ပုံဖေါ်ထားတာမဟုတ်ပေဘူး..
အနားတွေ ကြိုက်သလို လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်နိုင်တဲ့
ဗဟုဂံ ကြီး အဖြစ်ပုံဖေါ်ထားတာ..
အခု အနားဘယ်နှစ်ခုရှိမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး….။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အစအဆုံး အသစ်ပြန်ဆွဲပြီး အရင်ပြင်မှ ရမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း…။
အဲလိုဆို ဦးပါ ရေ ကျွန်တော်တစ်ခု တွေးမိပြီးစိုးရိမ်တာ တစ်ခုက
အခုအခြေခံ ဥပဒေကိုဆယ်စုနှစ်တစ်စုလောက်ဆွဲခဲ့တာမို့ ပြန်ရေးဆွဲရင်
ပို့စ်လေးကို ဖတ်ရတာ အင်မတန်မှ ဗဟုသုတရလှပါတယ် ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကို
ဦးဦးပါလေရာရေ နိုင်ငံတော်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကို ပြန်ဆွဲးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါဒယ်ဒဲ့ဗျ
ဟိုးအရင်က ဦးနေ၀င်းရဲ့ အာဘော်တွေကို နိုင်ငံဒ်ါသမဒ ဟာင်း ဦးဘယ်သူပါဒဲ့
နံမယ်ဒေါင်မေ့နေပီ သူ့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး အနားမရှိ တြိဂံပုံစံဖြင့်
လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအူးပဒေက ရေးဆွဲးတဲ့လူက ရေးဆွဲးပြီးပြီ အတည်ပြု့တဲ့လူက
အတည်ပြု့ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအခြေခံဥပဒေ မှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတာ လက်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံပါကြောင်း မဲထည့်လိုက်ရတဲ့
နိုင်ငံသားတွေထဲက ၉၀% လောက်ကသိမယ်မထင်ဘူး။
ကျမ ငယ်ငယ်တုန်းက Geometry အချိ်န်ဆိုရင် အရမ်းကျေနပ်ခဲ့ တယ်.သင်တဲ့ ဆရာကအရမ်းတော်ပြီး ကျမရဲ့ အဖြေတွေဟာမှန်ပါတယ်လို့ ၁၀၀% ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိခဲ့တယ်. အဲဒါက တောကျောင်းကလေးမှာ အလယ်တန်း ပညာသင်ယူခဲ့ စဉ်အချိန်တုန်းကပေါ့ . ဒေါင့် တွေ ဒီဂရီတွေကိုတွက် ဖို့ ကိုသာအားသန်ခဲ့ ပြီး အခုလိုဆက်စပ်တွေးခေါ်လို့ ရမှန်းမသိခဲ့ ဘူး
စာလုံးလေးတွေက..ကြီးတော့.ဖတ်ရတာ မျက်စိညောင်း…သက်သာတယ် ။
အဲ…ဒီလိုပဲ..လေးလေးနက်နက် ဝေဖန်တော့မယ်.နော် ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံကတော့ ကြာလေ အနားမညီတြိဂံနဲ့တူလေ ဖြစ်ပြီး
အစိုးရ၊၀န်ထမ်းနဲ့ ပြည်သူဆိုတဲ့ တြိဂံကတော့ ဘယ်လိုမှ အနားမညီနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ေ၇း၊ ဥပဒေပြုေ၇းနဲ့ တ၇ားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်တွေကနေ ကင်းလွတ်ပြီး အဆိုပါမဏ္ဍိုင်တွေကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းရှိနေရင် check & balance မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..
ဖတ်လို့ တော့ ကောင်းပါတယ်….
အချိန်ရမှ သေသေချာချာ လာမန့် မယ်နော်….
နေ့ လည် ထမင်းစားချိန်………… :harr:
အလွန်တွေးစရာတွေနက်နဲတဲ့ပိုစ့်လေးပါ။ ဗဟုသုတလည်း အများကြီးရပါတယ်။ ရိုးရိုးလေး လူပြိန်းတွေး တွေးရရင် သုံးနားညီတြိဂံမဟုတ်တဲ့ တြိဂံတစ်ခုကို သုံးနားညီတြိဂံဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့က လွယ်တော့ မလွယ်ဘူးထင်တယ်။ ကျွမ်းကျင်သူ ပစ္စည်းကိရိယာပြည့်စုံသူများအတွက်ကတော့ ဘယ်ကနေဘယ်လိုစပြင်မယ် ဘယ်လိုဆက်ဆွဲမလဲဆိုတာလွယ်နိုင်ပေမယ့်။ မကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ပစ္စည်းကိရိယာ မစုံလင်သူများအတွက်တော့ ကြည့်ကောင်းတဲ့ လှပတဲ့ သုံးနားညီတြိဂံလေးတစ်ခုအဖြစ်ရောက်ရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် တစ်ဆင့်ချင်း စိတ်ရှည်ဖို့နဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ ယူရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
“အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ ဥပဒေပြုရေးအာဏာနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့ ပါဝင်တဲ့ အာဏာပိုင်းခြား သတ်မှတ်မှု တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်လေး ပျက်သွားရင် နိုင်ငံတော်ကျရှုံးမှု (state failure) ဖြစ်သွားမှာပေါ့“
မညီလို့ ဖြစ်သွားခဲ့ ဖြစ်နေပါပြီ..
အဲဒါ ဘယ်လိုပြန်ညှိကြမလဲလို့ ပညာရှိများတွေးကြပါ..(တွေးရုံတွေးလို့ဘဲရပါမယ် )ပြုပြင်ဖို့တော့ တယ်မလွယ်ပါကွယ်..ဘဲဗျ…။